Fandraisana Ny Birao
Filoha mpanampy :
Mpandraharaha vola :
Sabotsy 14 martsa 2020 : Fampandrenesana
Noho ny valan'aretina miseho eto Frantsa dia miato aloha ny fiarahantsika mivavaka isak'alahady ao amin'ny Temple.
Hataontsika par conférence téléphonique izany fanompoam-pivavahana izany manomboka amin'ny alahady 15 martsa izao.
Laharana antsoina: 01 78 90 03 32
Code d'accès: 505273#
Manomboka amin'ny 15h30 toy ny mahazatra ny fotoanantsika.
Azontsika fianakaviana miray trano ny mitokana amin'ny efitra iray ary miantso miaraka, amin'ny alalan'ny antso tarobia iray (une seule ligne).
Aoka hitondra am-bavaka ny firenena maneran-tany isika manoloana izao valan'aretina izao.
Aoka tsy ho kivy sy ketraka ihany koa fa ny Tompo momba antsika mandrakariva ary tsy mamela ny mpanompony ho irery.
Indro ny tenin'ny soratra masina nalaina tao amin'ny bokin'Isaia 35, voalahatra amin'ny vaki-teny anio, zaraina amintsika, teny fampanantenana sy fampaherezana:
“Ampaherezonareo ny tànana miraviravy, ary hatanjaho ny lohalika malemy. Lazao amin’izay reraka am-po hoe: Mahereza, aza matahotra, Indro, Andriamanitrareo ho avy mitondra famaliana, dia famalian’Andriamanitra, Eny, Izy tokoa no ho avy ka hamonjy anareo.
Ny alonalona mitarehin-drano (mirage) dia ho tonga farihy tokoa, Ary ny tany mangetana ho loharano miboiboika.”
Mametraka ny veloma ombam-pirariantsoa.
Ny Komitin'ny Tafo.
Alahady 1 martsa 2020 : Culte clôture Jobily 60è
Ireto ny logo sy hira voafidy hankalazana ny Jobily 60è FPMA Bordeaux.
Toy izao no fandaminana vitsivitsy ho antsika Komity sy Biraon'ny Sampana, mpanamarim-bola :
- Fiofanana sabotsy 4 janoary 2020 : tsara marihina fa miova an'ity ambany ity ny toerana
Manomboka amin'ny 9h30 eny amin'ny Centre Spirituel La Solitude, 29 route de la Solitude - 33650 Martillac.
Maharitra hatramin'ny hariva ny fotoanantsika.
Aoka samy hitondra ny anjara "sandwich" avy ny mpiofana ho sakafo antoandro, azo atao koa ny misakafo eo amin'ny Mac Do tsy lavitra izay voalaza fa tsy dia lehibe, tsy ho antonona antsika rehetra miaraka.
Aza adinoina ny mitondra ny goûter sy rano sahaza hifampizarana ny maraina sy ny tolakandro...fa indrindra ny fihirana sy ny baiboly.
- Fiofanana sabotsy 11 janoary 2020 :
Manomboka amin'ny 14h30 eny amin'ny Lycée Tivoli, 40 avenue d'Eysines - 33200 Bordeaux.
Aza hadinoina ihany koa ny goûter hifampizarana.
Ampahatsiahivina fa miaraka amin'ny vady hatrany isika mandritra ireo fiofanana ireo.
Alahady 22 desambra 2019 :
Hasaina ianao hanatrika ny fotoana fankalazan’ny sampana ny Noely 2019, izao alahady 22 desambra 2019 amin’ny 3 ora sy sasany tolakandro ho avy izao.
Aorian’izany dia mbola hitohy amin’ny fifampizarana sakafo Agape isika, ao amin’ny Hâ 32, ka toy izao ny andinindininy momba izany :
Entrée : samy mitondra
Laoka : Vorona na/sy henakisoa
Dessert : bûche et clémentine
Ny fiangonana no hiantoka ny vary ary samy mitondra ny fitaovam-pihinanany sy zava pisotro sahaza avy.
Aza misalasala mitaona ireo havana aman-tsakaiza hiara-hizara ny sakafom-pifaliana amintsika.
Samy ho tahian’ny Tompo,
Ny komitin’ny tafo FPMA Bordeaux
Alahady 30 jona 2019 :
“ Ankino amin’ny Jehovah ny lalanao, ary matokia Azy, fa hataony tanteraka” Salamo 37:5.
Izany no tenin'Andriamanitra entina mamangy anao sy ny ankohonanao,
Misaotra ny Tompo isika fa raha nikasa, nitondra am-bavaka ny mpitandrina kandida sy ny fifidianana dia raisintsika amin'ny finoana ny valim-bavaka raha voafidy, anio, ho mpitandrin'ny Tafo FPMA Bordeaux ny Pasitera Jean Teddy RAMAHERIJAONA.
Miarahaba azy sy ny ankohonany isika, mitondra am-bavaka azy ireo ihany koa amin'izao asa fanompoana nekeny izao.
Fanambarana ny valim-pifidiana izao zaraina aminao izao fa ny Birao foibe no hampita amintsika ny fanambarana ofisialy.
Mahatsiaro ny Mpitandrina kandida iray am-bavaka ihany koa isika, mahatsiaro am-bavaka ny tafo rahavavy FPMA Grenoble, ary misaotra ny Tompo amin'ny famindram-pony amin'ny FPMA Bordeaux.
Mirary soa sy fitahiana,
Ny komitin'ny tafo
"Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony" Filipiana 2,13
Izany tenin'Andriamanitra izany no entina hiarabana anao sy hanasana anao amin'ny fotoana voalaza manaraka toy izao :
Ny Alahady 30 jona 2019 isika FPMA Bordeaux no hifidy ny Mpitandrina handrindra sy hiara hiasa amin'ny tafo, koa manasa anao hanatrika ny fotoana samihafa hiaonantsika amin'ny Mpitandrina kandidà :
28 aprily sy 2 jona : Pst Jean Teddy RAMAHERIJAONA
12 Mey sy 26 mey : Pst Marc RAKOTOARIMANGA
Aoka isika hitondra am-bavaka ny Mpitandrina sy ny Tafo amin'izao fikasana izao ary mino isika, ry Havana, fa mialoha làlana antsika ny Tompo amin'ny fanatanterahina izany araka ny Teniny.